Posted by ကိုကိုသုန် at 5:39 PM3comments:
President of the UNITED STATE ကသူရဲ့ပထမဆုံး Asia ခရီးစဉ်အဖြစ် Singapore သို့လာရောက်မည်ဖြစ်သည်.... အမေရိကန်သမ္မတ မစ္စတာအိုဘာမားက ဂျပန်နိုင်ငံသို့ အရင်သွားရောက်မှာဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၁၂ နှင့် ၁၃ ရက် တွင် ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီး စင်ကာပူသို့ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့တွင် Air Force One ဖြင့်ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်....
စင်ကာပူတွင် Apec Summit နှင့် ASEAN ခေါင်းဆောင်များနှင့်လည်းတွေ့ဆုံဖို့ ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်... စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့မှ ၁၅ ရက်နေ့အထိ ရှိနေမှာဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် စင်ကာပူမှတဆင့် တရုတ်နိုင်ငံ Shanghai နှင့် Beijing သို့လည်း သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်..... အဲဒီနောက်မှာတော့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ Seoul သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ....
မှတ်ချက် = President Obama ဓါတ်ပုံကို googel မှ ကူးယူပါသည်။
Posted by ကိုကိုသုန် at 2:22 PM2comments:
ဒီအချိန်ဆို သူတို့ပျော်နေကြတော့မယ် ကျွန်တော်ကောင်းကောင်း သိနေပါတယ်လေ…… ကျွန်တော်တို့အိမ်နားမှာ ဘုရားတစ်ဆူရှိတယ် အိမ်ကနေပြီး ဆယ်မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်သွားမယ်ဆိုရင် သမိုင်းဝင် ဆံတော်ရှင်စေတီ တစ်ဆူကိုရောက်သွားမှာပါ။ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ မတိုင်ခင်ညတိုင်း ကျွန်တော်တို့မြန်မာ့ရိုးရာ အစဉ်အလာအရ မသိုးသင်္ကန်းများ ရက်လုပ်ကြတယ်….. နောက်တနေ့ မနက်အာရုံတက်တဲ့ အခါမှာ ဘုရားပုထိုးတော်တွေမှာ မသိုးသင်္ကန်းများ ကပ်လျှူကြမှာဖြစ်ပါတယ်… ဒါကြောင့်သူတို့ပျော်နေကြတာပါ…… ရက်ကန်းစင်မှာ ရက်ကန်းယက်ကြမယ့်၊ ပြိုင်ပွဲဝင်ကြမယ့် အမျိုးသမီးလေးတွေပေါ့ ပျော်မယ်ဆိုလည်းပျော်စရာပါပဲလေ….. ရက်ကန်းစင် နာမည်တွေကလည်း လှပလိုက်တာ အမရာ၊ ကိန္နရီ၊ မဒ္ဒီ နှင့် သမ္ဘုလ တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်…… ပထမဆု၊ ဒုတိယဆု နှင့် တတိယဆု သုံးဆုလည်းချီးမြှင့်ဦးမှာတဲ့….. ဆိုင်းဝိုင်းကြီးကလည်း “လက်ခတ်သံ လက်ခတ်သံ မလေးလက်ခတ်သံ ” “ လက်ခတ်သံ ကျွန်းဖိုသား သောင်းတိုင်ကကြးသလေလေ” ဆိုတဲ့ “မလေးလက်ခတ်သံ” သီချင်းများနဲ့ ဧည့်ခံသီချင်းများကို ရွာစားကျော်က လက်ကုန်တီးခတ်ပြီး အဆိုတော်ကလည်း မမောနိုင်မပန်း သီဆိုဖျော်ဖြေနေကြတယ်လေ။
နောက်တနေ့ မနက်အာရုံမတက်ခင်မှာ အားလုံးပြီးစီးကြပါတယ်….. သင်္ကန်းရက်သူက ရက်လုပ်ပြီးတဲ့ အခါ တိုင်းထွာပြီး ၀ိနည်းနဲ့ အညီချုပ်လုပ်ကြပါတယ်…. အားလုံးပြီးစီးတဲ့ အခါမှာတော့ ရက်လုပ်ထားတဲ့ သင်္ကန်းတွင် ချည်ကျော်မရှိခြင်း၊ သေသပ်လှပ ကောင်းမွန်ခြင်း၊ ချုပ်ရိုးချုပ်သား ကောင်းမွန်ခြင်း၊ အမြန်ဆုံး နှင့် အကောင်းဆုံး ရက်လုပ်နိုင်တဲ့ အဖွဲ့ကို ပထမဆု၊ ဒုတိယအကောင်းဆုံး အဖွဲ့ကို ဒုတိယဆု နှင့် တတိယအကောင်းဆုံး အဖွဲ့ကို တတိယဆုများ ချီးမြှင့်ပါတယ်…. အာရုံတက်တဲ့အခါမှာတော့ သင်္ကန်းတော်များကို ကပ်လှူပူဇော်မည့် ရုပ်ပွားတော်မြတ်များရှိရာသို့ ရင်ပြင်တော်တလျှောက် သယ်ဆောင်ကြပါတယ်….. သယ်ဆောင်ရာ လမ်းတလျှောက်မှတော့ ပန်းများ၊ ပေါက်ပေါက်များ ကြဲကာ ပူဇော်ကြပါတယ်…..
လပြည့်နေ့ည ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ဆေးပေါင်းခသတဲ့၊ “ကတိသစ္စာများမြဲတဲ့အခါ နွယ်ပင်မြက်ပင်တော် ဆေးဘက်ဝင်တယ်တဲ့” ဆိုလိုတာကတော့ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ ညမှာ နတ်က္ခတ်တာရာတွေ စုံလင်တယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်…. ဒီလိုအချိန်မှာ မှန်ကန်တဲ့သစ္စာ စကားကိုဆိုပြီး စားတဲ့အစားအသောက်တွေက ဆေးဖက်ဝင်တယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်..... များသောအားဖြင့်တော့ မဇလီဖူးသုပ်စားကြတာကြုံဖူးပါတယ်…… တစ်ချို့တစ်ချို့သော လူငယ်တွေကတော့ ဆေးမင်ကြောင်ထိုးကြသတဲ့….. အစွမ်းထက်ချင် လို့ထိုးတာလား၊ လှချင်လို့ထိုးတာလားတော့ မသိပါဘူး၊ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ဟိုးအရင်ကတည်းက ရှိလာတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု့တစ်ရပ်ပါပဲလေ…. ရှေးအခါကတော့ ဆေးမင်ကြောင်၊ ထိုးကွင်းမင်ကြောင်မှ မရှိရင်ယောက်ကျားမပီသဖူးလို့ ပြောကြတာပေါ့…..
“ဆေးနက်ကယ်မှ ဆေးနီ၊ စုံစီထိုးကွင်း
အင်းပါ၊ စက်ပါ၊ တကိုယ်လုံးမှာ
ကျားနှင့် ကြောင်လည်း၊ တတောင်သာငဲ့”
ဟိုးအရင် မြန်မာများသည် ထိုးကွင်းမင်ကြောင်ထိုးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ယောက်ကျားပီသကြောင်း ပြသရန် နှင့် အစဉ်အလာအရလည်းကောင်း၊ ယုံကြည်မှု့အရလည်းကောင်း၊ အလှအပအတွက်လည်းကောင်း ထိုးကြတယ်လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်….. မြန်မာရိုးရာ ကိုယ်ခံပညာဖြစ်သော လက်ဝှေ့သတ်ခြင်းကို ထိုးသတ်ကြသည့် ပညာရှင်များကလည်း မြန်မာ့သူရဲကောင်းပီသစွာ ထိုးကွင်းမင်ကြောင်များထိုးကြသည်ပဲ…. ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု့ဖြစ်သေား ဆေမင်းကြောင်တွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်များ ကိုအချုပ်အားဖြင့် ဖော်ထုတ်ရမည်ဆိုလျှင် …….
နတ်ကြီးငါးပါးစသော မြင့်မြတ်သော ဆေးတို့ကို ဟင်းသပြဒါးဖြင့် ခါး၏အထက်ပိုင်းတွင် ထိုးသည်ကို အထက်ဆေး၊ ဆေးရိုးကြီးစသော ဆေးမျိုးတို့ကို နွားသည်းခြေနှင့် သတ်ထားသော မင်နက်ဖြင့် ခါးအောက်ပိုင်းတွင် ထိုးနှံသည်ကို အောက်ဆေးဟု အကြမ်းအားဖြင့် ခေါ်၏။
အထက်ဆေးများကို လည်တိုင်၏ တဖက်တချက်တွင် သိကြားရုပ်စစ်တစ်ခု၊ သိကြားရုပ်တုတစ်ခု၊ အလယ်သွင်းထားသေား ဆေးကွင်းနီတစ်ခုစီ။ လည်ဂုတ်ဆံတွင် ဗြဟ္ဗာရုပ်ကို အလယ်သွင်းသည့် ဆေးနီကွင်းတစ်ခု၊ ရင်အုံ နှစ်ဘက်ပေါ်တွင် က,နေသော ဇော်ရုပ်အလယ်သွင်းသည့် ဆေးနီကွင်းတစ်ဖက်တခု၊ အလယ်ဗဟိုရင်ချိုင့်၏ အောက်တည့်တည့်တွင် သူရဿဒီနတ်သမီးရုပ် အလယ်သွင်းသည့်ဆေးကွင်းနီတစ်ခု။
သူရဿဒီရုပ်၏ အောက်ဝမ်းပိုက်နှင့်တည့်တည့် နံစွန်းနှစ်ဘက်တွင် တေရဠ နတ်မင်းကြီးနှင့် ၀ီရဠက နတ်မင်းကြီးတို့ကို တကွင်းတခုစီ အလယ်ထား၍ လည်းကောင်း၊ နံဘေးတည့်တည့် ချိုင်းအောက် တဖက်တချက်တွင် ၀ိရုပက္ခ နှင့် ကုဝေရ နတ်မင်းကြီး တို့ကို တကွင်းတခုစီ အလယ်ထား၍လည်းကောင်း၊ လောကပါလနတ်မင်းကြီးလေးပါပုံ ဆေးနီကွင်းလေးခုကို ထိုးတတ်ကြ၏။
ထို့အတူပင် တောင့်သန်သော ပေါင်တန်တွင် ဂဠုန်ရုပ်၊ နဂါးရုပ်၊ များလူးရုပ်၊ ကြောင်ရုပ်၊ ဂ၀ံရုပ် စသည်တို့ကို အလယ်သွင်း၍ ဆေးရိုးဘီးဖြင့် ထိုးနှံသည့် စိမ်းညှို့ညှို့ မင်ကြောင်များသည်လည်း ရှေးခတ်မြန်မာများကို ခန့်ငြားပြီး၊ ယောက်ကျားပီသကာ တင့်တယ်စေပါသည်။ ထို့အတူပင် နောက်နေ့တွင် ထိုးထားသည့်ဆေးစွမ်း မစွမ်းကိုတော့ဖြင့် စမ်းသပ်သည့်အနေဖြင့် ကျေးရွာများတွင် လေးပင်သည့် ပစ္စည်းများ၊ အိမ်အတွင်းမှာထားသည့် ပစ္စည်းများကို ရွှေ့ပြောင်းထားခြင်းဖြင့် ဆေးစမ်းသပ်ကာ အပျော်သဘော ဆင်နွဲကြပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ မွေးဖွားလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဒီဆေးမင်ကြောင်တွေ မမြင်ရတော့လောက်အောင် ပျောက်ကွယ်သွားပါပြီ…… ဒါပေမယ့်အစဉ်အလာမပျက် အခုချိန်ထိတော့ အစဉ်အလာမပျက်ဆင်နွဲ နေတဲ့ပျော်ပွဲကတော့ “ကျီးမနိုးပွဲ” ပါဗျာ….. လပြည့်ကျော်တစ်ရက်နေ့ ညရောက်ပြီဆိုလျှင်ဖြင့် အမောင်ကာလသားတို့မှာ တစ်ညလုံး ချက်ပြုတ်စားသောက်ကာဖြင့် အသုတ်ဆိုင်များ၊ ကွမ်းယာဆိုင်များ နှင့် ထိုင်ခုံများကို နေရာရွှေ့ပြောင်းကြပါတတ်ကြပါတယ်….. တစ်ခါတလေများဖြင့် လူများများဖြင့် လမ်းမတွင် ညအိပ်ရပ်နားထားသော ကားများကိုပါ တွန်းပြီးတော်တော်ဝေးဝေး သို့ရောက်အောင် ရွှေ့ထားတတ်ပါသေးတယ်….. အပျိုကြီးများနေသောအိမ်ကို အငြိမ့်သဘင်ကြီး မင်းသားအလိုရှိသည်…… သမီးများမွေးထားသော အိမ်ရှေ့တွင် သမက်လောင်း လျှောက်လွှာလက်ခံသည်…. စသဖြင့် ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွဲလျှက်ရှိပါသေးတယ်….. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အခုရောက်နေတဲ့ နေရာမှာဖြင့် “ကျီးမနိုးပွဲ” မှာ ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ် ရောက်နေလဲဖြင့် မသိနိုင်အောင် ကျီးကန်းလည်းမတွေ့ စာကလေးလည်းမရှိသည့်အပြင် သူများအိမ်က ပစ္စည်းသွားပြီး နေရာရွှေ့ရင်လည်း ကြိမ်ဒဏ်လား ငွေဒဏ်လား တစ်ခုခုတော့ သေချာနေတဲ့အတွက် အဝေးကပဲလွမ်းလိုက်ရတဲ့……. လပြည့်ညနဲ့ ကျီးမနိုးပွဲ အကြောင်းလေးပေါ့ဗျာ……
၀န်ခံချက် = မြန်မာ့ရိုးရာဆေးမင်ကြောင်နှင့် ထိုးကွင်းမင်ကြောင်များ အကြောင်းကို ဆရာဦးမြ၀င်းရေးသားတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့ စာအုပ်မှ ကိုးကားပြီးဖော်ပြထားပါသည်။
Posted by ကိုကိုသုန် at 12:11 PM No comments:
Labels: အမှတ်တရ, အလွမ်းပြေ
စာမရေးဖြစ်တာ တော်တော်လေး ကြာသွားတယ်ဗျာ.....ကျွန်တော့်ကျန်းမာရေး မကောင်းတာကြောင့်ပါ.... ဒါပေမယ့် အစ်ကိုတွေ၊ အစ်မတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ ရဲ့ဘလော့လေးတွေ သွားလည်လိုက်တိုင်း စည်ကားနေကြတာတွေ တွေ့တော့ကိုယ့်ပိုးလည်း ပြန်ထလာပြန်တယ်... ဒါပေမယ့် သိပ်ပြီးနေလို့မကောင်းတဲ့ အချိန်တွေမှာတော့ ကွန်ပျူတာကို အီးမေးသုံးတာက လွဲလို့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးဗျာ.... အခုတော့ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်လို့ ကိုယ့်ဘလော့လေးကို ပြန်လည်ပြီးဂရုစိုက်ပါတော့မယ်.... ပစ်ထားဖြစ်တဲ့ အချိန်များမှာလည်း လာလည်သွားတဲ့ သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ....
ပြီးတဲ့လက ဆရာနီကိုရဲ ဆုံးသွားတယ်တဲ့ အစ်မမိုးချိုသင်းရဲ့ ဘလော့လေးမှာတွေ့လိုက်တော့ တော်တော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဗျာ.... ကျွန်တော်က သူ့စာအုပ်တွေကို ဖတ်သာဖတ်တာ သူ့ကိုမမြင်ဖူးသေးဘူး.... ကိုယ်ကအကုန်မဖတ်နိုင်တာလည်း ဖြစ်မှာပေါ့.... ဒါပေမယ့် သူ့နာမည်ကို မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်သွားတာက တစ်ခါဖတ်မိသွားကတည်းကပေါ့.... "တစ်သုံးခုနှစ်ရှစ်" ဘာမှန်းတော့မသိဘူးမဟုတ်လား..... ဆရာနီကိုရဲ ရေးတဲ့ဝထ္ထုတိုလေး တစ်ပုဒ်ရဲ့နာမည်ပါဗျာ.....
နောက်တခုက သူ့နာမည်ပေါ့..... အိမ်နာမည်က "ကိုရဲ" လို့ခေါ်တယ်တဲ့ ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာပါတယ်.... (ဘယ်စာအုပ်လဲတော့မမှတ်မိတော့ဘူး).... သူ့အမေကို စိတ်ဆိုးတဲ့ အခါ "ငရဲ" လို့ခေါ်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဗျာ.... သူစာတွေရေးတော့ ကလောင်နာမည် ပေးဖို့ဆိုပြီး စဉ်းစားတာလေးကိုက တော်တော်သဘောကျသွားတယ်ဗျာ..... အိမ်နာမည် "ကိုရဲ" ကိုအခြေခံပြီးရွေးတော့ ဘာထပ်ထည့်ရမလဲ စဉ်းစားတဲ့အခါ "ကကြီး" "အ" အထိက အစဉ်လိုက် ရေးပြီး တစ်လုံးချင်းစီကို ထည့်ကြည့်ရတယ်လို့ ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်...."ကကိုရဲ" "ကျောက်ကိုရဲ" "ကြောင်ကိုရဲ" "ချစ်ကိုရဲ" "ချမ်းကိုရဲ" "ဂကိုရဲ" စဖြင့်ပေ့ါ......နောက်ဆုံးတော့ သူ့နာမည်က "နီကိုရဲ" ဖြစ်သွားတယ်.....
နောက်ပြီး သူကျောင်းတတ်တဲ့အခါ (တက္ကသိုလ်ကျောင်း) သူတက်တဲ့ မေဂျာတဲ့ ရုက္ခဗေဒ ဘာသာရပ်ပါတဲ့.... သူ့ကိုယ်သူလည်းတော်တော် အံသြမိတယ်တဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အပင်တွေအကြောင်းကို သင်ရလို့ပါတဲ့.... သူငယ်ငယ်ကတည်းက ဒီအတိုင်း ရေမဆေးပဲ ကိုက်စားလာတဲ့ သခွားသီးမှာ ရေဓါတ်က ဘယ်လောက်ပါတယ်.... ဘာကဘယ်လောက် ညာကဘယ်လောက်နဲ့ တော်တော်စိတ်ညစ်စရာပါလို့လည်း ငြီးပြသွားပါသေးတယ်....
နောက်တော့ စာမေးပွဲဖြေတဲ့အခါ ဆရာမအယောက်လေးဆယ်ကျော် စောင့်တဲ့ကြားထဲမှာ သူတစ်ယောက်တည်း သွားပြီးဖြေရတယ်ဆိုတာတော့ တော်တော်သနားသွားတယ်ဗျာ.... ဘာဖြစ်လို့လဲ၊ ဘာလို့သနားတာလဲဆိုတော့ စာမေးပွဲခန်းထဲမှာက စာဖြေကျောင်းသားက သူတစ်ယောက်တည်း...... ပြီးတော့သူ့လွယ်အိတ်ကို သူ့ရှေ့ကခုံပေါ်မှာတင်ထားတာတောင် ဘာမှကြည့်လို့မရအောင် ဆရာမလေးဆယ်ကျော်.... မျက်လုံး ရှစ်ဆယ်ကျော်ရဲ့ စောင့်ကြည့်မှု့အောက်မှာ ဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတာ တွေးတာကြည့်ပေတော့ဗျာ....
ကျွန်တော်မှတ်မိသမျှလေးတွေပါဗျာ.... မှတ်မိသမျှလေးတွေကို ကျွန်တော်ပြန်ရေးတာ အလွမ်းပြေပါ.... အရေအတွက်နဲ့ စာသားမညီညွတ်တာလေးတွေ လွဲချော်နိုင်ပါတယ်ဗျာ.... ခွင့်လွတ်ပေးကြပါလို့ ကြိုတင်တောင်းပန်ပါတယ်.... ကိုနီကိုရဲ.... ဘယ်မေဂျာကို တက်ခဲ့လဲ.... တကယ်ပဲ ရုက္ခဗေဒ ကိုတက်ခဲ့လားဆိုတာကတော့ အစ်မမိုးချိုသင်း တို့ကိုပြန်ပြီး မေးရင်ရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ.... ကိုယ်ချစ်တဲ့ စာရေးဆရာတစ်ယောက် ဆုံးရှုံးသွားလို့ ၀မ်းနည်းပါတယ်.... မိသားစု အတွက်လည်း ပြန်လည်အစားထိုးလို့မရနိုင်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှုပါဗျာ....
Posted by ကိုကိုသုန် at 12:10 PM No comments:
ညီမငယ်မေကဆုန်က လာပြီး tag သွားပါတယ်.... အမှန်အတိုင်း ပြောရမယ်ဆို အခုတလောနေမကောင်းပါဘူး...ဘာဖြစ်မှန်းမသိပါဘူး Night Duty ဆင်းရတဲ့ နေ့ဆိုလည်း ပြန်ပြီးအိမ်မှာ အိပ်တဲ့အခါ အိပ်ရေးမ၀ဘူး Day Duty ဆိုရင်လည်း ညညဆိုတော်တော်နဲ့ အိပ်မပျော်တော့ မနက်မိုးလင်းတဲ့ အခါမထနိုင်ဘူး.....ဒါပေမယ့် လည်းရအောင်ထပြီး အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ အလုပ်သွားရတော့တာပေါ့..... ဒါကြောင့် စာတွေဆက်တိုက်မရေးနိုင်တာပါ....အခုတော့ ညီမငယ်မေကဆုန်ကလာပြီး tag သွားလို့ ကိုယ်ကလည်း ဘလော့လေးကို လွမ်းနေတာနဲ့ရေးလိုက်ပါတယ်.....ပထမဦးဆုံး tag ခံရတာဖြစ်ပါတယ်.....ကဲရေးပါပြီဗျာ။
"ဘာတွေတွေးနေမိမှန်း မသိဘူး စစ်တိုက်တာတွေပဲတွေးနေမိတယ်....."
"အရာရာကို နည်းနည်းနောက်ကျနေတယ်ထင်တယ်.....ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေကို သူများတွေက အရင်လုပ်ပြီးသွားကြတယ်"
"ကျန်းမာရေးကတော့ကောင်းပါတယ်.....အိပ်ရေးမ၀တာလေးပါပဲ...... ဒါပေမယ့် ၀ိတ်တော့ ကျသွားတယ်ဗျာ....နည်းလမ်းလေးများလိုချင်ရင်ပြောပါ.....ကူညီပါ့မယ်"
"လက်ရှိဖတ်နေတာက ဆရာတက္ကသိုလ် စိန်တင် ရေးထားတဲ့ "အောင်ဆန်းသူရိယ ဗိုလ်ကြီးတိုက်ချွန်း"စာအုပ်ပါ တော်တော်ကောင်းပါတယ်"
"ကျွန်တော်လည်း Farm Town ထဲက အိမ်လေးမှာ ပင်ပန်းတဲ့ အခါသွားပြီး အနားယူပါတယ်....."
"ဘာတွေမှန်းတော့ မသိဘူး များသောအားဖြင့် အရေးများတာကတော့ Service Report တွေပေါ့......"
"ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ ဟောကြားထာတဲ့ တရားတော်တွေပါ..... အလုပ်တွေများပြီး စိတ်ပင်ပန်းနေလို့ပါ..... တရားနာလိုက်တော့ တော်တော်စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်....."
"ကျွန်တော် ကဗျာတော့ မရွတ်မိဘူးထင်ပါတယ်..... ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတော်သီချင်းတော့ ဆိုဆိုမိပါတယ်"
" အာလူးပူရီ ....ပလာတာ....."
"ကိုယ်ဖာသာကိုယ် ဘာကိုပြောခဲ့လို့ ပြောခဲ့မှန်းတောင် မသိအောင်မေ့နေတတ်တယ်....... ပေးစရာရှိတာတွေတော့ ပြောမနေပါနဲ့တော့...."
"အမေ့အိမ်မှာ စားရတဲ့ ဟင်းတွေ......ချည်ရည်ဟင်း"
"လျှပ်စစ်မီး မမှန်တဲ့ နေရာ...... အင်တာနက်နှေးတဲ့နေရာ....."
"NOKIA N97 လေးတစ်လုံးလောက်လိုချင်တဲ့ ဆန္ဒဖြစ်နေပါတယ်"
"အခုလက်ရှိမှာ ချစ်စရာဆိုလို့ တစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်ဗျာ.....ဘယ်သူလဲမှန်းကြည့်ပေါ့"
"အလုပ်အကြောင်းတွေပေါ့ စိတ်ဖိစီးတယ် ဆိုတာများလား.....ညညဆိုအိပ်လို့မရတာ ဒီအလုပ်အကြောင်းတွေစွဲလန်းနေလို့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်...."
"မိသားစု စုစုစည်းစည်းနဲ့ ထမင်းဝိုင်းလေးပေါ့....အခုတော့မိဘတွေက ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ ကိုယ်ကတော့ ကျွန်းပေါ်မှာ"
"စော်ကြည် ကျောက်အောင် ကြွေးကြေ တော်တော်နဲ့ အသက်မသေ အလုပ်မလုပ်ပဲချမ်းသာပါစေ"
" မြန်မြန်...မြန်မြန်....အခု အလုပ်မှာဘာဖြစ်ဖြစ် အရေးကြီးတာတွေပဲတွေ့နေရတယ်လေ"
"မနိုင်းနိုင်းစနေ ပြောသလို အသက်သာကြီးလာပြီး မရင့်ကျက်သေးပါဘူး"
"ညီမငယ် မေကဆုန်ပြောသလို စိတ်ကလည်း ကလေးစိတ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်ဗျာ"
"နောက်ဆုံး ၀န်ခံချင်တာကတော့ ဘ၀ဟာလှေကားထစ်တွေဆိုရင် ကျွန်တော်ဟာ လှေကားထစ်တွေ ရဲ့အောက်ဆုံးထစ်မှာရှိသေးပြီး အခုမှ စပြီးတက်ဖို့ကြိုးစားနေတုန်းပါ.... ဒါကြောင့်အခုပို့လေးမှာ စာဖတ်သူအနေနဲ့ အမြင်မတော်တာ တွေ့ရင် ဆုံးမပါဗျာ ကျွန်တော်ကြိုးစာပြီး ပြင်ပါ့မယ်"
ရေးတော့ပြီးသွားပါပြီ.... အခုမှ ရေးပြီးတင်တာစိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့ ညီမငယ် မေကဆုန် ကိုတောင်းပန်ပါတယ်...
Posted by ကိုကိုသုန် at 12:54 PM 1 comment: